တရုတ်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်း နင်းရှတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် ရေပေါ် ဆိုလာပြားများ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံက တတိယမြောက် လေယာဉ်တင်သင်္ဘောရေချ
တရုတ်နိုင်ငံ အကြီးဆုံးသဲကန္တရအားပတ်ထားသည့် ရထားလမ်း ပြီးစီးတော့မည်
လကမ္ဘာ၏ ဘူမိမြေပုံသစ် တရုတ်နိုင်ငံ ထုတ်ပြန်
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း နင်းရှဟေး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ လင်ဝုမြို့ Majiatan မြို့ငယ်တွင် တည်ဆောက်ထားသည့် ရေပေါ် ဆိုလာပြားများအား ဇွန် ၁၇ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ရင်ချန်း ၊ ဇွန် ၂၀ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း နင်းရှဟေး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ လင်ဝုမြို့ Majiatan မြို့ငယ်ရှိ သတ္တုတွင်း ရေနုတ်မြောင်းကို တူးဖော်တည်ဆောက်ထားသည့် ရေကန်ကြီးတစ်ခု၏ ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဆိုလာပြားများကိုစွာ တပ်ဆင်ကာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ပေးလျက်ရှိသည်။စွမ်းအင်ပမာဏ ၁၇ ဒသမ ၉၄ မီဂါဝတ်ဂ် ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ရန် ပုံစံထုတ် တပ်ဆင်ထားသည့် ယင်းဆိုလာပြားများသည် ရေကန်မျက်နှာပြင်၏ ဧရိယာအကျယ်အဝန်း ၂၀ ဟက်တာကို ဖုံးလွှမ်းထားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဆိုလာပြားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံမှ တစ်နှစ်လျှင် သန့်စင်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကီလိုဝတ်ဂ်နာရီပေါင်း ၂၅ သန်း ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ရန် မျှော်မှန်းထားကြောင်း နှင့် စံနှုန်းမီ ကျောက်မီးသွေး အသုံးပြုရမှု တန်ချိန်ပေါင်း ၇၆၄၃ ဒသမ ၂ တန် ကို ချွေတာပေးနိုင်မည်ဖြစ်သလို ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကိုလည်း တန်ချိန် ၂၁,၀၀၀ ကျော် အထိ လျှော့ချပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
Floating solar panels in NW China’s Ningxia
YINCHUAN, June 19, 2022 (Xinhua) — Floating solar panels are placed above the surface ofalake formed by drainage of mining in Majiatan Town, northwest China’s Ningxia Hui Autonomous Region.
The solar power plant coversawater area of 20 hectares withadesigned installed capacity of 17.94 megawatts.
The solar power plant is expected to generate green electricity over 25 million kWh per year, which will save over 7643.2 tonnes of standard coal and reduce carbon dioxide emissions by more than 21,000 tonnes.
Photo – Aerial photo shows solar panels ofapower plant in Majiatan Town, Lingwu City, northwest China’s Ningxia Hui Autonomous Region, June 17, 2022. (Xinhua/Wang Peng)
တရုတ်ရိုးရာဆေးဝါး ကျွမ်းကျင်သူများက ကမ္ဘောဒီးယားလူနာများအတွက် ကျန်းမာရေးတိုးတက်စေရန် ကူညီပေး